Fihetsika mety hitranga: ny fomba fanamboarana azy | Tontolo alika
Fihetsika mety hitranga: ny fomba fanamboarana azy
Ny tsy fitandremana sy tsy fahalalam-pomba omentsika ny biby fiompintsika indraindray dia miteraka olana toy ny fitondran-tena fananana amin'ireo tompony sy amin'ireo zavatra manodidina azy ireo. Amin'ireny tranga ireny dia afaka mahita mariky ny herisetra toy ny fimenomenona na manaikitra isika, zavatra izay tokony hamahana avy hatrany izany. Azontsika atao izany amin'ny alàlan'ny fanarahana lalàna mifehy ny fampiofanana sasany.
Ho hitantsika fa manana io olana io ny alikantsika rehefa tsy avelany hisy hikasika ny kilalaony na ny sakafony, na rehefa tsy avelany hanatona ny tompony ny hafa. Matetika ireo biby ireo dia manana fananana sasany amin'ireo olona ipetrahany, ary mijanona eo anilany foana na eo aminy. Noho izany mitady ny fahefana tsy ananan'ny tompony ny alika. Tsy tokony avelantsika hanana izany toe-tsaina izany.
Ny iray amin'ireo lesoka mahazatra indrindra dia ny fiezahana hanala an-keriny ireo zavatra mibontsina amin'ny alika. Tokony hanafina azy ireo isika rehefa matory na variana izy; Hanampy anao handresy ny olanao izany. Io no fotoana ahafahantsika manomboka miasa amin'ireo zavatra hafa izay tsy dia mahaliana anao, mampianatra azy ireo hamela azy ireo rehefa baiko sy manome valisoa azy ireo miaraka amin'ny sakafo vitsivitsy avy eo.
Alika maro no manana ny sakafo, mimonomonona ary manandrana manaikitra izay olona manakaiky azy. Tetika hamaranana ity fihetsika ity dia fahano izy amin'ny toerana samihafa isan'andro, amin'izay ampisehoantsika azy fa isika no mifehy ny sakafony. Araka izany, ho very tsikelikely ny fitiavanao anao.
Ny zava-dehibe indrindra dia izany aza avela hampiasa ny fahefany amin'ny hafa ny biby. Noho io antony io dia tena zava-dehibe ny tsy hamelantsika azy ireo handry amintsika isaky ny mitaraina amin'ny hafa izy ireo mba tsy hanatonany antsika, ary hatosintsika ho toy ny sazy noho ireo fihetsika mahery setra ireo. Raha hitantsika fa tsy mahavita mamaha ny olana isika, dia tsara kokoa ny manatona manam-pahaizana momba ny fanabeazana alika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Fihetsika mety hitranga: ny fomba fanamboarana azy
Ny alikako manafina zavatra: nahoana?
Inona no hatao raha tsy te handeha ny alikako?